यो मोटो केटा कोका कोला मार्केटिंग मन पर्छ Martech Zone
यस फ्याट केटाले कोका कोला मार्केटिंग मन पराउछ
शनिबार, जनवरी 19, 2013 आइतबार, अगस्त 30, 2015 Douglas Karr
म बोसो भन्दा बाहिर छु ... वास्तवमा, मैले मोटो हुनुमा फिर्ता पाउनको लागि औसत व्यक्तिको तौल हराउनु पर्छ। म यसलाई मेरो थाइरोइड, मेरो आनुवंशिकी, मेरो काम, मेरो तनाव स्तर ... केहि दोष दिन चाहन्छु। यद्यपि तथ्य यो छ कि यो एकदम सीधा छ। जब म सही र व्यायाम खान्छु, मैले वजन कम गर्दछ। जब म व्यायाम गर्छु वा सही खाउँदिन, म तौल बढाउँछु। तनावपूर्ण समयमा जब म मेरो स्वास्थ्यलाई छोडेर अगाध खाडलमा डुबुल्की मार्छु ... र विगत केही वर्षहरूमा धेरै तनावपूर्ण भएको छ।
मोटो हुनु पोषण वा समझ व्यायाम र शरीर कसरी काम गर्दछ को ज्ञान को अभाव बाट छैन। म शर्त दिन तयार छु कि मैले अधिक पुस्तकहरू पढेको छु, धेरै वृत्तचित्रहरू हेरेँछु र पोषणको बारेमा अधिक स्वास्थ्यकर व्यक्तिहरूको भन्दा बढी बुझ्ने छु। म शर्त पनि गर्छु कि मैले कसैको भन्दा बढी तौल गुमाएको छु ... बर्षौं सयौं पाउन्ड। दुर्भाग्यवस, मैले मेरो जीवनशक्तिमा स्वास्थ्य र कार्य सन्तुलनको प्राथमिकता र अभावको कारण धेरै र धेरै प्राप्त गरें।
एक छेउ मेरो सेतो पिठो र चिनी को माया को पनि मेरो इन्टरनेट र स्वतन्त्रता को प्रेम हो। इन्टरनेटले एक सार्वजनिक माध्यम प्रदान गर्दछ जहाँ एक व्यक्ति वा कम्पनीले पत्रकार वा सरकारलाई उनीहरूको रोशनीको लागि पर्खनु पर्दैन। एक कम्पनीले मामिलाहरू यसको हातमा लिन सक्दछ, र आफ्नै मेसेजि develop विकास गर्न सक्छ - फिल्टरिंग, राय, वा सेन्सरशिप बिना। म किन यो तथ्यलाई प्रेम गर्दछु कोका-कोला स्वास्थ्य जोखिमहरूको सामना गर्दैछ नयाँ विज्ञापनहरूको श्रृंखलामा यसको उत्पादनको साथ सम्बन्धित।
हामी यस्तो संसारमा बाँचिरहेका छौं जहाँ जहिले पनि कुनै पनि चीज गम्भीर रूपमा गलत हुन्छ, हामी आफ्नो औंलाहरू औंल्याउन र कसैलाई दोष लगाउनुको सट्टामा हामी व्यक्तिगत रूपमा परिवर्तनलाई कसरी प्रभाव पार्न सक्छ भनेर विश्लेषण गर्नु भन्दा राम्रो महसुस गर्छौं। निगमहरू एक सजिलो लक्ष्य हो, खास गरी जब तिनीहरू धेरै लाभदायक हुन्छन्। हाम्रा बच्चाहरूलाई बाहिरी गतिविधिहरूमा बढी सक्रिय बनाउनु, हाम्रा स्मार्टफोनहरू राख्नु, जिम जाँदा वा स्वस्थ खाना खानु भन्दा हामी मोटापाको महामारीमा कोकाकोलालाई दोष दिन कत्ति सजिलो छ। हामी दोष दिन्छौं विश्व स्तरीय उत्पाद मार्केटिंग सट्टा वा कम ऊर्जा चाहिन्छ पेशाको विकासको सट्टा।
कुनै पनि मार्केटिंग अन्तर्निहित तपाईको उत्पाद अधिक पटक खरीद गर्न अधिक व्यक्ति प्राप्त गर्न को लागी रणनीति हो। म विश्वास गर्दिन कि मार्केटिंग कुशलतापूर्ण छ, तर मलाई लाग्छ कि मानिसहरूले उनीहरूको कार्यको लागि कम र कम जिम्मेवार लिइरहेका छन्। सबैलाई थाहा छ कि सोडा एक पेय होइन जुन स्वस्थ जीवनशैलीमा योगदान गर्दछ। मलाई त्यो बताउन कोका कोलाको आवश्यकता पर्दैन ... तर म खुसी छु कि उनीहरूले आफ्नो उत्पादनको बारेमा तथ्यहरू हमला गर्ने सबैलाई भनिरहेका छन्।
वैसे… मैले गत रात कोकको दुई चश्मा लिएकी थिए, र ती अविश्वसनीय थिए। आज, मैले स्वस्थ ब्रेकफास्ट गरें, स्न्याकिking काटें, र मैले धेरै स्वस्थ डिनर लिएँ। भोलि म मेरो बाइक चलाउने योजना गर्दै छु (गत हप्तामा पहिलो पटक सवारी गरेपछि म आज दुखी छु)। मलाई भोलि त्यो मोटरसाइकलमा मेरो बट राख्नु पर्छ भनेर मलाई बताउन मलाई कोका कोला वा सरकार चाहिदैन।
म मोटो छु, म मुर्ख छैन।
गरीब वेब प्रदर्शनको लागत
जनवरी 21, 2013 मा 8: 46 एएम
उत्कृष्ट पोष्ट डग! पछिल्लो केहि महिनाहरुमा र २०१ me मा पनि चलाखीपूर्ण र स्वस्थ हुनको लागि काम गर्दैछु। यहाँ होशियार र अधिक जिम्मेवार र कम मूर्ख र सबै अरूलाई दोष दिइरहेका छन् तर हामी आफै!
ओह, र म जुलाई २०१ my मा मेरो भाईसँग रेन २०१ event कार्यक्रममा सवारी गर्न प्रतिबद्ध थियौं। त्यसोभए, म पनि एक सानो काठी जस्तै दु: खी गरिरहेको छु।
जनवरी 21, 2013 मा 9: 10 एएम
अति उत्तम! भाग्यले साथ दिओस्!!!
जनवरी 21, 2013 मा 9: 51 एएम
स्मार्ट दृष्टिकोण, सामान्य रूपमा कोकबाट। मलाई जुवा खेल्ने सम्झना दिलाउँछ - "जिम्मेवार भई खेल्नुहोस्"। व्यक्तिगत रूपमा, यो पोष्टले तपाईंको सबैभन्दा मनमोहक गुणहरूको एक उदाहरण दर्साउँछ: वास्तविक र पारदर्शी हुँदै। तपाईं एक स्मार्ट मार्केटर हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई बाहेक, यी गुणहरूले तपाईंलाई पूर्ण रूपमा प्याकबाट भिन्न गर्दछ र तपाईंको कम्पनीको सफलतामा योगदान गर्दछ। तपाईं एक राम्रो मान्छे हो, श्री डग।
जनवरी 21, 2013 मा 10: 12 एएम
धन्यवाद @ twitter-9755792: disqus!
जनवरी 24, 2013 मा 9: 02 एएम
के म कोठामा स्किपिक हुँ कि उनीहरूले ?० वर्ष पहिले नाफा नाफामा फस्ने चिन्ता गर्नुको सट्टा त्यसो गरेको भए? र म सँधै शुरूका सpt्कष्टलाई घृणा गर्दछु किनभने तथ्य यो छ कि DK लातले हमलामा फिर्ता आएको छ र यो सुन्दर छ।
यो राम्रो छ कि कोक स्वास्थ्य सचेत विपणन गरिरहेको छ राम्रो छ - तर एकै साथ मलाई लाग्छ यो किनभने यो त्यहाँ अटलान्टा मा मान्छे को लागी पैसा छ किनभने छ। सोडाले तपाईंलाई द्रुत उर्जा प्रदान गर्दछ र उही समयमा तपाईंलाई डिहाइड्रेट्स गर्दछ किन तपाईं पक्कै पनि सक्नुहुन्न। कमसेकम म सक्दिन त्यो सम्बोधन भइरहेको छैन। के सम्बोधन भइरहेको छ कि मानिसहरूले क्यालोरीहरू गणना गर्न सक्दछन् र अधिक कोका कोला र मद्यपान गर्न सक्दछन् - जस्तै चकलेट वा बिग म्याक @ म्याकडोनाल्डको सट्टा चीजबर्गरसँगै जान्छन्।
मार्केटिंगमा त्यहाँ कुनै स्वर्गदूतहरू छैनन्, तर तपाईंको लडाई धर्मी छ र म तपाईंको प्रशंसा गर्दछु, 'ब्रोमान्स।